Ntụle a na-arịọ arịrịọ ma ọ bụ nke a kwụrụ ụgwọ bụ nyocha dị egwu | Martech Zone
Ntụle a na-arịọ ma ọ bụ nke a kwụrụ ụgwọ bụ nyocha dị egwu
Anyị nwere mkparịta ụka siri ike na mmemme idu ndú mpaghara na ịnakọta nyocha site na azụmaahịa na ndị ahịa n'ịntanetị. Ọtụtụ n'ime mkparịta ụka ahụ gbara gburugburu na-akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-akwụghachi ndị ahịa ụgwọ maka nyocha. Abughi m onye ọka iwu, yabụ m ga-atụ aro ka ị gwa nke gị tupu ịge m ntị. My stance na nke a dị mfe… adịghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ reviews. Nwere ike ghara ikwenye na m, mana dịka ụlọ ọrụ ọchụchọ na-agbagha usoro ụgha, nyocha nwere otu okwu yiri ya. Thelọ ọrụ ndị sonyere na-efu ọtụtụ ihe karịa ka ha nwetara.
Ihe ize ndụ nke ịkwụ ụgwọ na ụgwọ ọrụ
Ọ bụ nkwenye nke m na ị ga-enwe nsogbu 4 mgbe ị na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ụgwọ:
Okwu Iwu - may nwere ike na-agbasa FTC ntuziaka. Ọbụghị naanị nke ahụ, onye ọrụ, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ onye ị na-akwụ ụgwọ nọkwa n’ihe ize ndụ nke imebi ụkpụrụ nduzi FTC. Taa, anyị anaghị ahụ ọtụtụ ọrụ na nke a. Agbanyeghị, n'ọdịnihu m kwenyere na a ga-enwe usoro kachasị iji mata mmekọrịta ga-emecha mee ka ndị niile nwee nsogbu. E wezụga gọọmentị, ya ejula gị anya na otu n'ime nyiwe na-agba gị akwụkwọ.
Ime ihe ike - You nwere ike itinye obere ego na nyocha taa, mana mgbe anwudoro gị imebi usoro ọrụ nke saịtị ahụ, ọdịnaya ahụ ga-ala n'iyi ruo mgbe ebighi ebi ma aha gị nwere ike mebie nke ọma karịa itinye ego ọ bụla ị tinyere. Inweta jidere ịkwụ ụgwọ maka nyocha na ịnwe nke ahụ n'ihu ọha erughị uru ọ bụla. Ego ole na ole nọrọ taa nwere ike ịmefu ụlọ ọrụ gị ihe niile.
Ike n'Ezi - Kpọrọ, ebee ka iguzosi ike n'ezi ihe gị dị ka azụmahịa? Nke a ọ bụ n’ezie etu ịchọrọ ịzụ ahịa? Ọ bụrụ na enweghị ike ịtụkwasị gị obi ijikwa aha dị ọcha n'ịntanetị, ị kwenyere n'ezie na ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa ga-achọ ka gị na ha zụọ ahịa?
Quality - Mee onwe gị ihu ọma ma gaa gụọ ụfọdụ nyocha na Ndepụta Angie. Ndị a abụghị otu ahịrịokwu, ha bụ nyocha dị mma nke na-akọwa usoro niile ọtụtụ ndị na-azụ ahịa gafere site n'aka ndị na-eweta ọrụ. Ndepụta Angie na-agbadata ụgwọ ọrụ ha n'oge na-adịbeghị anya ma ndị na-azụ ahịa na-achọpụtazi ihe kpatara ọtụtụ ndị debanyere aha ndị Angie hụrụ ọrụ ahụ n'anya. Nnukwu nyocha siri ike adịgboroja.
Yabụ kedu ka ị si enweta nyocha ndị ọzọ?
Enwere ihe dị iche na na-arịọ maka nyocha ma jụọ maka ha. M kọọrọ a akụkọ a afọ ole na ole gara aga na a Arịrịọ nyocha GM nke ahụ jọgburu onwe ya. Ihu ọma, ọ bụrụ na m zaa ihe ọ bụla na-ezughị oke, isi mmadụ ga-egbutu. Nke ahụ bụ ịrịọ arịrịọ. Tellinggwa ndị ahịa gị na enwere ụgwọ ọrụ maka nyocha ha, ọ bụghị ihe dị iche karịa ịrịọ nyocha ahụ! Emela ya.
Mgbe otu n’ime ndị ahịa anyị jiri ekele, degara anyị aka na ntanetị, ma ọ bụ gwa anyị n'onwe ha ụdị ekele ha nwere maka anyị, anyị na-ekele ha ma jụọ ha ma ha ga - edetu ya na ederede… nyochaa na ntanetị. Rịba ama iji? Ha buru ụzọ gwa anyị, anyị rịọkwara maka ya. Anyị arịọghị ya n’enyeghị ntinye ha. Anyị ekweghị nkwa ọ bụla na nloghachi, ma. Anyi nwere ike soro onyinye dika ikele? N'ezie, mana atụghị anya ya ma ọ bụ kwe ya nkwa.
M ga-atụ aro ibipụta ibe gị maka saịtị nyocha ọ bụla na saịtị gị. Ọ bụghị na-arịọ ka atụmanya na ndị ahịa mara ebe -ahụ gị… na a obi ụtọ ahịa ga-agba ọsọ ka gị Facebook peeji nke na-enye gị a nyochaa. Mee ka ndị ahịa gị dị mfe ịchọta, gụnye ya na nkwukọrịta dị n'ime ya na ndị ahịa gị, ma kesaa ọmarịcha nyocha gị mgbe etinyere ha.
Ogo nke nyocha ọ bụla nyocha na-adaberekarị n'ịdị mma nke nyocha ha nwere n'ebe ahụ. Ewezuga atumatu siri ike, ọtụtụ n'ime ọrụ ndị a na-etinyekwa algorithms iji wepu nyocha ndị na-adịghị mma. Amazon dị ezigbo njọ gbasara amụma ha ma ọ na-arụsi ọrụ ike ugbu a gbara ọtụtụ puku mmadụ na-ere nyocha. Ndị a bụ ụfọdụ saịtị nyocha na amụma ha:
Iwu Nyocha Amazon
Amazon anaghị eme ntakịrị okwu ma chọọ ka ndị enyi, ndị ezinụlọ, ma ọ bụ ndị otu ụlọ ọrụ mee nyocha. Ha achọghịkwa ka ị kwụọ ụgwọ maka ha, n'ezie.
Nyocha Nkwado - Iji chebe iguzosi ike n'ezi ihe nke Nyocha Ndị Ahịa, anyị anaghị ekwe ka ndị na-ese ihe, ndị edemede, ndị mmepe, ndị nrụpụta, ndị mbipụta, ndị na-ere ma ọ bụ ndị na-ere ahịa dee Nyocha Ndị Ahịa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke aka ha, biputere nyocha na-adịghị mma na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ asọmpi. , ma ọ bụ iji votu na enyemaka nke nyocha. Maka otu ihe ahụ, ndị ezinụlọ ma ọ bụ ezigbo ndị enyi nke mmadụ, otu, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere na Amazon nwere ike ọ gaghị ede Nyocha Ndị Ahịa maka ihe ndị ahụ.
Nyocha a kwụrụ ụgwọ - Anyị anaghị ekwe ka nyocha ma ọ bụ ntuli aka na enyemaka nke nyocha ndị edepụtara maka mgbanwe nke ụdị ọ bụla, gụnyere ịkwụ ụgwọ (ma ọ bụ n'ụdị ego ma ọ bụ asambodo onyinye), ọdịnaya ego, ntinye aka na asọmpi ma ọ bụ asọmpi, mbelata ego ịzụrụ n’ọdịnihu, ngwaahịa ọzọ ma ọ bụ onyinye ndị ọzọ.
Iwu Nyocha nke Google
Iwu Nyocha Google n'ụzọ doro anya na ọ ga-ewepu ọdịnaya nke ahụ mebiri iwu nyocha ha:
Esemokwu mmasị: Nyocha na-aba uru nke ukwuu mgbe ha na-akwụwa aka ọtọ na agaghị ele mmadụ anya n'ihu. Ọ bụrụ na inwere ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'otu ebe, biko egbula azụmaahịa gị ma ọ bụ onye were gị n'ọrụ. Enyela ma ọ bụ nara ego, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ iji dee nyocha maka azụmahịa ma ọ bụ dee nyocha na-adịghị mma gbasara onye asọmpi. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọchụnta ego, edobela ụlọ ọrụ nyocha ma ọ bụ kiosks na ebe azụmahịa gị naanị ịrịọ maka nyocha edere na ebe azụmahịa gị.
Iwu Nyocha Yelp
Yelp flat flat na-agwa ndị azụmaahịa ka Ajụla maka Nyocha:
Nyocha ndị a na-achọsi ike ka obere sọftụwia anyị na-akpaghị aka na-atụ aro ya, nke ahụ ga-emekwa ka i mebie. Kedu ihe kpatara na akwadoghị nyocha ndị a? Ọfọn, anyị nwere ọrụ na-adịghị mma nke ịnwa inyere ndị ọrụ anyị aka ịmata ọdịiche dị n'etiti nyocha dị adị na nke adịgboroja, yana mgbe anyị chere na anyị na-arụ ọrụ dị mma na ya site na iji algọridim kọmputa anyị mara mma, eziokwu dị njọ bụ na nyocha ndị a rịọrọ arịrịọ na-adakarị ebe n'etiti . Dị ka ihe atụ, were ya na onye ọchụnta ego ahụ “rịọrọ” ka o lebara ya anya site n’itinye laptọọpụ n’ihu onye ahịa ya ma jiri ihu ọchị gwa ya ka o dee ihe ọ ga-atụle mgbe ọ na-ele ya. Anyị achọghị ụdị nyocha ndị a, yabụ na ọ gaghị abụ ihe ijuanya mgbe akwadoghị ha.
Usoro nyocha nke Angie
Ndepụta nke Angie nwere nghọta doro anya na usoro nyocha ha:
Niile nyocha gị na ọkwa gị ga-adabere na: (i) Ahụmịhe mbụ gị na ndị na-enye ọrụ ị na-enyocha; ma ọ bụ (ii) dị ka enyere n'okpuru Nkebi nke 14 (Ndị na-enye ọrụ) n'okpuru, onye ọ bụla na ahụmịhe ahụ mbụ nke onye ahụ na nlekọta ahụike ma ọ bụ onye na-eweta ahụike nke ị nwere ikike iji gosipụta ozi ahụike na ahụmịhe onye dị otú ahụ;
Niile nyocha gị na ogo ndị na-enye ọrụ gị nke ị na-enye ogo ga-abụ eziokwu, eziokwu ma zuo ezu n'akụkụ niile;
Do naghị arụ ọrụ maka, inwe mmasị ọ bụla, ma ọ bụ jee ozi na ndị isi oche, nke ọ bụla n'ime ndị na-enye ọrụ ị na-enyefe nyocha na ọkwa;
Do naghị arụ ọrụ maka, nwee mmasị ọ bụla ma ọ bụ jee ozi na ndị isi oche nke ndị ọ bụla na-asọmpi nke ndị na-eweta ọrụ nke ị na-enyefe nyocha na ọkwa;
Notnweghị ụzọ ọ bụla metụtara (site n'ọbara, ikuchi, alụmdi na nwunye, ma ọ bụ mmekorita ụlọ, ọ bụrụ na onye na-eweta ọrụ bụ onye ọ bụla) na nke ọ bụla n'ime ndị na-enye ọrụ ị na-enye nyocha ma ọ bụ nyocha;
Aha gị na ozi nyocha gị ga-adị maka ndị na-enye ọrụ ị na-enyocha; na
Ndepụta nke Angie nwere ike gbanwee, gbanwee, ma ọ bụ jụ nyocha gị ma ọ bụrụ na ha ekwenyeghi na mbipụta mbipụta nke Angie, nke nwere ike ịgbanwe site n'oge ruo n'oge na ndepụta Angie's List naanị.
Iwu Nyocha Facebook
Facebook na-egosi ha Standkpụrụ Obodo mana enwetaghi nke oma banyere aririo ma obu nzaghachi ugwo obu ezie na ha mesie ntule kwesiri.
Tags: amazon nyochaa iwuamazon nyochaamazon na-enyocha ndị nyochaangie's list review iwundepụta angieiwu nyochaa facebooknyocha facebookatumatu nyocha googleiwu nyocha googlenyocha googleakwụ ụgwọ nyochaụgwọ ọrụ reviewsyelp nyocha iwuyelp nyocha
Nchịkọta Google: Metrics Report Mkpa maka Ahịa Ọdịnaya
LookBookHQ: Njikọ Ọdịnaya na Akpaaka Platform